Fegwọ ụgbọ njem ọha na Isi obodo | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèỤgbọ njem ndị njem
14 / 06 / 2014 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ
Esgwọ ụgbọ njem ọha na-abawanye na Isi Obodo: Dị ka ụgwọ tarifụ ọhụrụ ahọpụtara na Ankara, ụgbọ ala EGO, njem 2 TL zuru ezu, ịbanye na 1,50 TL dị ọnụ ala na Ankaray na Metro.
Mgbe ọbịbịa ọnụ ahịa njem ụgbọ njem ọha na Istanbul ụnyaahụ, taa na Ankara, ationgbọ njem Ọdụ Transportgbọ njem (Ukome) dịka usoro oge ụgbọ ala General EGO kpebisiri, Ankaray na Metro zuru 2 TL, ego mbata 1,50 TL, ego ịbanye na 0,67 TL, ego nnyefe bụ XNUMX penny.
Ọnụ ahịa 33 AYDIR agbanwebeghị
Dika ozi enwetara site na Ankara Obodo ukwu, e mere iwu ọhụrụ na ego ụgbọ njem ọha. Na General Assembly of Transportation Coordination Center (UKOME), ekpebisiri ụgwọ ọhụụ na ebubata ụgbọ njem nke Isi Obodo, ebe enweghị mgbanwe ọ bụla maka ọnwa 33.
EGWU IGBO 2 WAS TL
15 dabere na tarifụ ọhụrụ, nke a ga-etinyere malite na Sọnde, ụgbọ elu EGO abawanyela na 1,75 TL nke bụ 2 TL na Metro na Ankara, ma belata ego (nwata akwụkwọ, onye nkuzi wdg) na-abanye 1,30 na 1,50 TL. Ekpebie ibugara ego mbufe site na ugbo ala ndi a site na 0,59 Kuruş rue 0,67 Kuruş.
MINIBUS TARIFF CHANGO
Dika onu ahia ohuru nke UKOME siri kwuo, onodu ugwọ ndi njem n’ime ugbo ala nke ndi mmadu gbakwunyere na 2,10 TL rue 2,40 TL, ebe a na-abawanye njem nbanye ego site na 1,30 TL rue 1,50 TL. Flightsgbọ elu minibus dị mkpụmkpụ site na 2,10 TL ruo 2,40 TL, ụgbọ elu minibus nke dị ogologo site na 2,40 TL ruo 2,75 TL.
TARIFF NEW ga-amalite na Sọnde
A ga-amalite itinye ego maka ego ọhụụ site na Sọnde ruo ndị isi 15 June, ndị isi, mmanụ ọkụ, ọkụ eletrik, gas sitere na akụkụ mapụtara amụba n'ọtụtụ dị iche iche, n'agbanyeghị ọnwa 33, enwebeghị ịrị elu na njem ọha na isi obodo, o kwuru. Turkey si dị ọnụ ala ọha iga ọrụ nwekwara mata na Ankara-enye ndị ọchịchị, ọ bụla mgbanwe mere na ọha iga ego nke banyere 3 afọ, ha mata na ha nwere na-eme ka ọhụrụ ndokwa.
Ankara Ụgbọ njem
Esgwọ ụgbọ njem ọha na-abata na Ankara! ..
Ulo eji ebu ndi mmadu biara na Istanbul
Mersin-Tarsus-Adana Na-ebu Ụgbọ njem Ụgbọala abịa
Ụgbọ njem nke ọha na Mugla
Ụgbọ njem njem Sakarya na-abawanye
Enweghị Ngalaba Ụgbọ njem na 2018 na Malatya
Enweghi ugbo ahia na Adana
Esgwọ Transportgbọ njem Ọha na Bursa Na-eto! Tarifọ Ọhụrụ Dị Mma na Jenụwarị 1
Ego Maka Transportgbọ njem Ọha na Istanbul?
Fegwọ ụgbọ njem ọha na Sakarya
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Kahramanmaras
Zụlite njem ụgbọ njem na Ankara
Ụlọ Ọrụ Na-ebufe Ụgbọ njem
Turkmenistan kwadoro obi ebere maka oru nkwukọrịta okporo ụzọ
Mayor Babaş tinye oru ngo nke Kastamonu na agenda
40 Hike na pegwọ Ropeway na Erciyes!
Ụgbọaka Batrị Batrị Na-eme na 100
Ọnụ ego na njem ụgbọ njem na Mersin